पर्साका अधिकांश कुखुरा फर्म तस्करीको चल्लाबाट संचालन, यस कारण अनुगमन गर्दैनन् क्वारेन्टाईनका प्रमुख डा. यादव | गोठालो खबर – सूक्ष्म समाचार , डिजिटलको आधार
पर्साका अधिकांश कुखुरा फर्म तस्करीको चल्लाबाट संचालन, यस कारण अनुगमन गर्दैनन् क्वारेन्टाईनका प्रमुख डा. यादव
११ श्रावण २०७८, सोमबार १९:०६
वीरगंज, ११ साउन । पर्साको सीमावर्ती क्षेत्रका अधिकांश कुखुरा फर्म तस्करीकै चल्लाबाट संचालनमा रहेको पाइएको छ । नेपालभन्दा भारतमा कुखुराको चल्ला सस्तो पर्ने भएकोले पर्साको सीमावर्ती क्षेत्र बर्वा, झौवागुठ्ठी, ईटियाही, अमरपट्टी, धोरे, पकहा मैनपुर र सबैठ्वा लगायतको ठाउँमा संचालित कुखुरा फर्मले तस्करीकै चल्लाबाट व्यवसाय संचालन गरेको पाइएको हो ।
भारतसंग जोडिएको पर्साको यस ठाउँमा संचालन रहेको कुखुरा फर्ममा अहिले पनि तस्करी भएरै आएको चल्ला रहेको एक जना कुखुरा फर्म संचालकबाटै जानकारी पाइएको छ । खुल्ला सीमा नाकाको फाइदा उठाउँदै पर्साका केही तस्करहरूले तस्करी मार्फत कुखुरा फर्ममा कुखुराको चल्ला आफै पु¥याउने गरेको स्रोतको दाबी छ ।
सीमा क्षेत्रमा खटिएका प्रहरी तथा जिल्लाबाट गस्ती गर्न खटिएका प्रहरीले पनि बेला बेलामा भारतबाट तस्करी भई आएको कुखुराको चल्ला बरामद गरी नष्ट गर्दै आएको कैयौँ उदाहरण छ । सशस्त्र प्रहरी बल पर्साका प्रहरी उपरीक्षक एसपी राजेन्द्र खड्काले पनि एक वर्षमा करिब ५० लाख मूल्य बराबरको तस्करीको चल्ला बरामद गरी नष्ट गरिएको बताउँछन् । स्रोतले दाबी गरे अनुसार रातीको समयमा केही प्रहरी प्रशासनकै मिलेमतोमा तस्करले तस्करीको चल्ला कुखुरा फर्ममा पु¥याउने गर्दछन् । जुन प्रहरीले बेला बेलामा बरामद गरेको तस्करीको चल्लाले पनि प्रमाणित हुन्छ कि पर्सामा संचालन रहेको कुखुरा फर्ममा तस्करीकै चल्लाबाट कारोबार हुन्छ । तसर्थः तस्करीको चल्लाबाट पनि कुखुरा फर्म संचालन रहेको बेला बेलामा प्रहरीले बरामद गर्दै आएको अवैध कुखुराको चल्लाबाट पनि प्रमाणित हुन्छ ।
पशु क्वारेन्टाईन कार्यालय वीरगंज, पर्साका प्रमुख डा. हरेराम यादवले आफूहरू प्रहरीले बरामद गरेको चल्ला नष्ट गरेको भन्दै पर्सामा संचालित कुखुरा फर्मको अनुगमन नगरेको बताउँछन् । अधिकांश कुखुरा फर्म तस्करीको चल्लाबाट संचालित छ भनेर प्रश्न गर्दा डा. यादवले अनुगमन र कारबाही गर्ने आफ्नो क्षेत्राधिकार नभएको बताउँदै उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयले भनेपछि मात्रै हामीले अनुगमन गर्ने गोलमटोल जवाफ दिन्छन् । पर्सा, बारा र रौतहट, यी तीन जिल्लाका प्रमुख समेत रहेका डा. यादवलाई बिना दर्ता वा तस्करीको चल्लाबाट कुखुरा फर्म संचालन रहेको पाइएमा कारबाही गर्ने अधिकार भए पनि उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (CDO) को नाम लिई आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजे ।
पर्सामा कति कुखुरा फर्म संचालन रहेको छ भने विषयबारे बुझ्दा डा. यादवले आफूसँग त्यसको रेकर्ड नभई पशु कार्यालयमा हुने बताए । यता पशु कार्यालय वीरगंजका प्रमुख बिरबहादुर श्रेष्ठसंग बुझ्दा उनले आफूहरू कहाँ सबै कुखुरा फर्मको तथ्यांक नभएको बताउँछन् । प्रमुख श्रेष्ठले केही तथ्यांक आफूहरू कहाँ भएको, केही स्थानीय तहसंग रहेको बताए । तर प्रमुख श्रेष्ठले भने,‘‘पर्सामा संचालित कुखुरा फर्मको सबै तथ्यांक पशु क्वारेन्टाईन मै हुनुपर्छ ।’’ गैर कानुनी तरिकाले संचालित कुखुरा फर्मको अनुगमन गर्ने र दोषी ठहरिएमा कारबाही गरिने पनि पशु क्वारेन्टाईन नै रहेको अर्थात् डा. यादवकै क्षेत्र रहेको प्रमुख श्रेष्ठ बताउँछन् । तर यता पशु क्वारेन्टाईनका प्रमुख डा. यादवले गोलमटोल जवाफ दिई आफ्नो क्षेत्राधिकार पनि नहरेको बताउँछन् ।
स्रोतले दाबी गरे अनुसार चल्ला तस्करी गर्ने तस्कर र प्रत्येक कुखुरा फर्म संचालकले मासिक रूपमा महिनावारी दिने गरेकोले पशु क्वारेन्टाईन कार्यालयले अनुगमन तथा छानबिन गर्ने काम नगरेको हो । जसका कारण पर्साका सीमावर्ती क्षेत्रका ती गाउँहरूमा तस्करीकै चल्लाबाट व्यवसाय संचालन गरिएको जनाइएको छ । पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पिताम्बर घिमिरेले तस्करीकै चल्लाबाट संचालन रहेको कुखुरा फर्म अनुगमन गर्ने निकाय पशु क्वारेन्टाईन नै भएको बताउँछन् । आफ्नो क्षेत्रको काम गर्न नसोधीकन पनि आफै गर्नुपर्छ भन्दै उनले निर्देशन चाहिएको खण्डमा हामीसंग बुझेर गर्दा हुने बताए ।
प्रमुख डा. यादवले दिएको गोलमटोल प्रतिक्रियाबाट पनि पर्सामा अधिकांश कुखुरा फर्म तस्करीकै चल्लाबाट संचालन रहेको संकेत गर्छ । अतः यसको छानबिनतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ ।
कुखुरा फर्म तस्करीको चल्लाबाट संचालन